Ny Xiaomi Mi Smartband 4 dia natomboka tamin'ny 26 Jona tany Espana | Androidsis
Taorian'ny nanolorana azy tamin'ity herinandro ity, Ny Xiaomi Mi Smartband 4 dia nanana hetsika fampisehoana tany Espana. Ity hetsika ity dia nanambara indray ny pitsopitsony rehetra momba ity fehin-tanana vaovao ity ny marika sinoa. Ary koa amin'ny fampidirana azy eo amin'ny tsena Espaniola, izay efa naseho ny daty fandefasana azy sy ny vidin'ny varotra.
Ity Xiaomi Mi Smartband 4 ity dia tonga miaraka amin'ny fanovana endrika lehibe, miaraka amin'ny efijery miloko lehibe kokoa amin'ity indray mitoraka ity. Ho fanampin'ny fampidirana asa vaovao ao aminy. Fehin-tànana izay natao hahomby amin'ny marika.
Araka ny efa nampoizina, ny maodely natomboka tany Espana dia ny kinova tsy misy NFC an'ny fehin-tànana. Amin'izao fotoana izao dia tsy mbola nisy voalaza momba ny fandefasana an'io kinova io. Tsy fantatray na manana fikasana ny handefa ity kinova Xiaomi Mi Smartband 4 any Espana ity na tsia ny orinasa.
Raha te hividy ny fehin-tànana any Espana dia mila miandry herinandro roa isika. Ny daty famoahana ofisialy azy dia ny 26 Jona, satria efa nanamafy i Xiaomi. Amin'ity daty ity dia azontsika atao ny mividy azy eto amin'ny firenentsika amin'ny fivarotana ara-batana sy an-tserasera.
Mikasika ny vidiny, ity Xiaomi Mi Smartband 4 ity dia mitentina 34,99 euro. Vidiny lafo ho an'ity taranaka vaovao an'ny marika sinoa ity, na dia lasa lafo indrindra aza ny namela antsika hatramin'izao. Saingy ny fanovana sy fanatsarana nitranga tao dia nahatonga io fiakaran'ny vidin-javatra io ho mendrika.
Tsy fantatray raha hamoaka ireo fanontana manokana amin'ny fehin-tànana, aingam-panahy avy amin'ny The Avengers. Tsy nilaza na inona na inona momba izany ny orinasa amin'izao fotoana izao. Na izany na tsy izany, Amin'ny 26 Jona dia afaka mividy amin'ny fomba ofisialy an'ity Xiaomi Mi Band 4 ity isika. Fehin-tànana mampanantena mitazona fahombiazana eo amin'ny tsenan'ny alohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ny Xiaomi Mi Smartband 4 dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana
Ny Xiaomi Mi 9T dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana
Ny mpandefa grenady akaiky dia azo alaina ao Fortnite izao